DAAWO:- Faarax Macalin oo difaacay Dowlada Somaliya | Wardoon
Home Somali News DAAWO:- Faarax Macalin oo difaacay Dowlada Somaliya
DAAWO:- Faarax Macalin oo difaacay Dowlada Somaliya
Guddoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamanka dalka Kenya, Faarax Macallin ayaa ka hadlay xiisadda diblomaasiyeed ee u dhaxeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Faarax Macallin oo ka qeyb galay barnaamij uu qabtay taleefishinka Ebru TV ee dalka Kenya ayaa sheegay in go’aanka dowladda Kenya ay xiriirka ugu jartay Soomaaliya uu ahaa mid aan wax sabab ah lahayn.
Waxa uu sheegay in shirkii London ka dhacay ee shidaalka Soomaaliya ay xogtiisa tahay mid banaanka taalla, islamarkaana wax xaraash xiroomiyin shidaal ah aan shirkaas lagu sameyn.
Faarax Macallin ayaa shaaca ka qaaday in waxa dowladda Soomaaliya ay sameysay ay ahayd uruurinta iyo soo bandhigista xogta shidaal ee xeebaha Soomaaliya, islamarkaana ay si ula kac uga leexatay dhul-badeedka ay ku muransan yihiin Soomaaliya iyo Kenya ee kiiskiisa uu yaallo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ.
“Haddaan nahay reer Kenya, xaggeen ka keenay arrimaha oo dhan ee ah; Soomaaliya noo imaneysa, dhulkeena ayay qaadanaysaa, ma aqaan xaqiiqdii waxan dhan halka ay ka socdaan” ayuu yiri Faarax Macallin.
“Laba arrin mid un baa jirta, in dowladda Soomaaliya ay been sheegeyso oo xogta banaanka taal ee shirkadda Spectrum wax ka duwan ay jiraan, iyo in wasaaradda arrimaha dibedda Kenya shaqadeeda gabtay, oo aysan saameyn wax baaritaan ah, balse wax kasta waa cad yihiin”
Previous articleFarmaajo oo diiday inuu lakulmo Muuse Biixi+ Sababta
Next articleLiverpool iyo Bayern oo barbaro ku kala baxay +SAWIRRO
Beesha caalamka oo Dowladda Somalia uga digtay in si khaldan loo...